usetyenziso lujika i-galaxy s20 ye-ultra okanye inqaku le-10 ngokudibanisa kwimiboniso yombono ebusuku
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Uhlelo lokusebenza lujika i-Galaxy S20 Ultra yakho okanye iNqaku 10 Plus kwiigogo zombono ebusuku
Uhlelo lokusebenza lujika i-Galaxy S20 Ultra yakho okanye iNqaku 10 Plus kwiigogo zombono ebusuku
Kunyaka ophelileyo, i-Samsung yazisa ngeshelufu ephezulu Imodeli ye-S10 5G eza kuthi kamva ifike kunxweme lwase-US, kwaye inento entsha kraca kumgca weGPS S. Ngaphandle kokuphambuka kwexesha layo le-12GB ye-RAM / ye-1TB, inqaku lesithathu elahlukileyo lokwahluka kwe-S10 kwathiwa lahlukile kwikhamera ye-quad-camera ngasemva.
Yintoni evuse umdla wethu ngelo xesha, nangona kunjalo, yayiyimfihlakalo 'yokuqonda okungcono kwendawo' eyayisetyenziswa yiSamson ngelixa ichaza into eza kuziswa ziikhamera ezine zangasemva kumfuziselo womzekelo we5G womgca ohloniphekileyo we-S10.
Isamsung, kuye kwavela, ukuba ibisenza ixesha lokubaleka (ToF) ubunzulu benzi boluvo bekhamera ukuba bangene kwii-smartphones zalo okwethutyana. Itekhnoloji yahlukile kuneekiti ezilungiselelwe ukukhanya zokufunda ubuso phambi kweefowuni ezinje ngothotho lwe-iPhone 11 kuba inokwenza imephu kwigumbi lonke eligcwele izinto kuwe.
Ukuseta kwekhamera ye-TrueDepth kwii-iPhones kusebenzisa amanqaku angama-30,000 ukuphuhlisa i-matrix yobuso bakho be-3D, ngelixa iikhamera ze-ToF zisebenzisa inzwa kunye nekhithi yokukhanya encedisayo enokufumana kunye nemephu ukuya kuthi ga kumanqaku angama-300,000 kumgama omalunga neenyawo ezilishumi, ukuzisa amathuba ngakumbi Ukujonga indawo ye3D.
Ngena ukuze uphumelele i-smartphone entsha kwiTing Mobile kunye neFowuniArena!
Kwithiyori, izinzwa ze-ToF zingakuvumela ukuba utshintshe iimpahla zedijithali, udlale imidlalo yokwenyani engathandabuzekiyo, kunye nesimbo somntu ophambeneyo ngelixa ukhonza i-Kinect-style backhands ngokuchasene namagumbi akho. Ngokwenyani, ubukhulu becala banceda ezinye iikhamera kwikhithi ngasemva kwefowuni ukuba zifezekise ubunzulu kunye nokuqonda okungafaniyo kweefoto ezinje ngemizobo apho ukwahlula umxholo kwindawo yangasemva yokufiphaza ngokuchanekileyo kubalulekile.
Guqula i-Galaxy S20 + yakho okanye i-Ultra kunye neNqaku le-10 + kwizixhobo zombono wasebusuku
Iikiti zexesha lokuhamba ngenqwelomoya, kodwa, zinokusetyenziselwa enye into eyonwabisayo- kwaye loo nto kanye yile Usetyenziso lweMbono yoBusuku ekuvumela ukuba usebenzise ikhamera yeToF ukuskena igumbi lakho elimnyama kunye nokukhupha imephu yobushushu esezantsi evumayo yayo nantoni na ejikeleze. Ewe, ebumnyameni, yiyo loo nto ii-apos; yiyo loo nto umxholo ongezantsi wenkqubo ngu-ToF Viewer.
Iziphumo ezingafunekiyo ezingafakwanga ekufikeleleni kubunzulu bekhamera ngasemva kweefowuni ezixhotyiswe ngenzwa yeToF, zikhokelela kwinto enje ngolu hlobo lungezantsi. Kulungile, eh, ubuncinci kude kube kwiisenzi ze-ToF ziye kufakwa kwiinkcukacha zemephu kunye nomgama ngeekhamera zeLiDAR ezinje ngePad Pro entsha eya kuthi ekugqibeleni iwele kwiimodeli ze-iPhone 12 Pro.
I-iphone 6 kunye necala lesikrweqe
t mobile yesine yentengiso kaJulayi
Iifowuni zeT-Mobile, izicwangciso kunye neendaba
I-Android 6.0.1 inokuvumela i-LTE band 12 ye-Nexus 5X kunye ne-6P kwi-T-Mobile
'Yenziwe eMelika' -Nazi iiapos ezintathu zeefowuni zeenkampani ezintathu zezona nkampani zibalaseleyo zaseMelika
Isicwangciso sovavanyo lwe-Agile-Ngaba siyayidinga ngokwenene?
Isamsung kunye neapos elandelayo Galaxy Tab S7 kunye nokuhlaziywa kweTab S7 + kuya kuyiphucula kakhulu ukusebenza kweS
Olona luhlu luLungileyo oluMnyama ngo-2021 lusebenza kwi-Best Buy: izinto esizilindeleyo
Eyona nto iphambili kwiAmazon Prime Day yeselfowuni: Samsung Galaxy, LG, Motorola, OnePlus, kunye nokunye
Uyilawula njani iPC yakho ukude usebenzisa i-smartphone okanye ithebhulethi yakho (i-Android, i-iOS)
Iifowuni ze-Samsung, iindaba kunye nokuphononongwa
Qokelela i-18,000 yeedola ngokuba ngowokuqala ukuyincothula i-Samsung Galaxy S5 kwiVerizon kunye ne-AT & T.